Palestina: Mijaly Ny Mponina Ao Gaza Fa Tapaka Jiro Tsy Misy Solika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2012 12:27 GMT
Vakio amin'ny teny Français, srpski, Italiano, বাংলা, عربي, Español, македонски, русский, English
Folo taona mahery izay dia lasa mifameno ny voambolana “Gaza” sy “krizy”. Ny hadadasiky ny krizy dia hatramin'ny ady sy fandarohana baomba sy fananiham-bohitra miaramila ka hatramin'ny fibodoana ara-miaramila, ka ny tamin'ity tranga ity kosa dia tsy misy ny solika ary tapaka ny herinaratra.
Ankoatra ny fahirano ataon'ny Isiraely amin'izao fotoana izao, dia miaritra krizin-tsolika vao haingana ihany koa ny faritra Gaza, fa ny hany misy dia ny lafo dia lafo avy any Isiraely izay voafetra ny fatrany tonga any an-toerana. Manampy ny tsy fisian'ny herinaratra ny tsy fisian'ny solika, satria ilaina izy io hamelomana ny gropin'orinasa, ny gropy fiandry any amin'ny hopitaly, fanaova-mofo sy paompy fisintonan-drano maloto ankoatra ny herinaratra ilaina isan-tokantrano.
Ny niharam-boina voalohany natrehin'ny faritra tamin'ny fahatapahan-jiro dia ny zazalahy fito volana Mohammed Al Helou, izay maty rehefa lany solika ny gropy mampandeha ny fameloman'ainany.
Mpamaham-bolongana Randa Abu Ramadan nanoratra bolongana izay manadihady ny momba anao araka ny fotoana ahazoan'ny tranonao jiro:
Ambonin'izany, tsy maintsy mitady fomba handrindrana ny fandaharam-potoanany mifanaraka amin'ny fisian'ny herinaratra ny olona. Yousef Abu Watfa, mpanangom-baovao ao amin'ny Al Jazeera Talk, no nanoratra momba ny fiainan'ny renin'ny namany fa miantraika any amin'ny fanaovana raharaha an-tokantrano ny zavamisy:
Ny fitsapan-kevitra notsongaina farany no maneho fa 48 isan-jaton'ny Gazaita dia miampanga ny governemanta ao an-toerana noho ny krizin-tsolika ao Gaza. Izz Shawa manoratra ao amin'ny Twitter:
Mahamarika ny fifampiangana misy eo amin'ny manampahefana Palestianiana ihany koa ny mpamaham-bolongana Yasser Ashour araka izay soratany ao amin'ny bolongana:
Na dia maro aza ny fanambarana nataon'ny solontenan'ny governemanta any Gaza hiarovan-dry zareo ny tenany, milaza fa misy ny “teti-piokoana” goavana mamely azy ireo dia tsy mino izany ny olona. Bilaogera say mpaka sary Khaled Safi manoratra ao amin'ny bolongana:
Niarahan'i Ola Anan sy i Yasmeen El Khoudary nanoratra.